बतास काण्ड कसरी हुँदैछ मत्थर ? « Sajilokhabar
बतास काण्ड कसरी हुँदैछ मत्थर ?
काठमाडौँ, ३० पुस । नेपाली सञ्चारमाध्यममा एक साता अघिबाट बतास समूह समाचार हर्ट केक बन्यो । बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रालय परिसरमा बनाउँदै गरेको रेष्टुरेन्टको विषय मुख्य मुद्दा बन्यो । गोरखापत्र दैनिकले बतास समूहले दरबार संग्रालयमा सम्झौता भन्दा बढी क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट बनाएको सानो समाचार ब्रेक गरेको थियो ।
गोरखापत्रको त्यो समाचार सोसल मिडियाको एजेण्डा बन्यो । सोसल मिडियाबाट बतास जस्तै तीब्र गतिमा प्रवाह भयो । बतास समूहको तीब्र आलोचना पछि मूलधारका मिडियाको समाचारको मुख्य एजेण्डा मात्र बनेन,मन्त्रीको पनि एकाएक सक्रियता बढ्यो । मिडियाले बतास समूहका अन्तरकुन्तर खोज्न थाले, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगश भट्टराईको निर्णयले रेष्टुरेन्टको अनुमति दिएको लगायतका प्रशंग जोडिएर बतास समूहका समाचार सार्वजनिक भए ।
बतास समूहको राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नारायणहिटी दरबारको मात्र होइन, पशुपतिको धर्मशाला, हायत होटलको सम्पति कब्जा गरेको लगायतका विषय सार्वजनिक भए । नेपालका पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमासमेत बतास समूहको बतास चल्यो । सामाजिक सञ्जालको मुख्य एजेण्डा बनेको बतास समूह मिडियाकोसमेत एजेण्डा बन्यो ।
बतास समूह संचालकका संचालकको विगत-वर्तमानको नालेबेली, आर्थिक, सामाजिक हैसियतदेखि राजनीतिक पहुँचका विषय बतास सरह मिडियामा आए । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बतास समूह आपराधिक समूहमा रुपान्तररित हुने अवस्था आयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेम आले बतास समूहका विरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । मन्त्री आलेको आदेशमा दरबार संग्रालय परिषरमा बतास समूहले बताउँदै गरेको रेष्टुरेन्टको संरचना भत्काइयो । जब बतास समूहका देशभर भएका लगानीका अनतरकुन्तर मिडियामा एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्यो त्यसपछि भने बतास समूहले मिडिया उपयोगको नीति अख्तियार गर्यो ।
बतासको मिडिया उपयोग
बतास मूहका विरुद्धको प्रचार मत्थर नभएपछि जनसम्पर्क (पिआर)को प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुनु पर्दछ । अध्यक्ष आनन्दराज बतास लगायत बतास समूहका संचालक आफै मिडियामा प्रतिक्रिया दिन थाले । उनीहरु रेडियो, टेलिभिजनमा अन्र्तवार्ता दिए । अध्यक्ष आनन्दराज बतासले केपी ओलीसँग मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड लगायत सबै नेतासँग राम्रो भएको र आर्थिक सहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले केही कमजोरी भएपनि आफुहरु अपराधि नभएको स्पष्टिकरण दिए । उनीहरुका भनाइले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउन थाल्यो ।
बतास समूहले पुस २८ गते सात बुँदे अपिल जारी गर्यो । यस अपिललाई सबै जसो सञ्चारमाध्यमले स्थान दिए । बतास समूहका पक्षमा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका व्यवसायिक संस्था र तिनका नेताले बोल्न थालेपछि बतास समूहका विरुद्धको मिडिया आक्रमणमा सन्तुलन कायम भयो । बतास समूहले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो कुरा राख्ने सञ्चारमाध्यमलाई धन्यवाद पनि दियो । आफूमाथि भएको मिडिया आक्रमण रोक्न एक प्रकारले बतास समूह सफल भएको छ ।
कुनै पनि निजी कम्पनीको आफ्नो जनसम्पर्क शाखाको काम आफ्नो उत्पादन र सेवा बिक्री गर्ने मात्र कार्य होइन, कम्पनीको बिग्रिएको छवि सूधार गर्नु पनि हो । बतास समूहको जनसम्पर्क शाखाले बिग्रिएको छवि एक सातामै ट्रयाकमा ल्यान एकहदसम्म सफल भएको छ ।
तर, के बतास समूहको विज्ञप्ति, अपिल वा जनसम्पर्क शाखाको सक्रियताले मात्र मिडिया आक्रमण कम भएको हो रु भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालका केही ठूला सञ्चारमाध्यम अहिले बतास समूहको रक्षाका लागि अग्रपंतिमा उभिन थालेका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यम विज्ञापन र आर्थिक प्रभावमा पनि परेका चर्चा नचलेको होइन । केही मिडियामा बतासको लाभको बतास चलेको गन्ध ह्वास्सै आएको छ ।
नेपालका सबै मिडिया सेटिंगबाट चल्छन् भन्ने पनि होइन । अधिकांश मिडियाका आफ्ना एजेण्डा छैनन् । छन् भने राजनीतिक उद्देश्यका एजेण्डा छन् । साना मिडिया ठूला मिडियाले उठान गर्ने एजेण्डा पछ्याउने गर्दछन् । अरुको एजेण्डा पछ्याउने मिडियाले बतास समूहले के गर्दैछ ? मिडियाको कसरी उपयोग गर्दैछ ? उसले मिडियाको कसरी उपयोग गर्दैछ ? भन्ने पत्तै पाउँदैनन् ।
गोरखापत्र दैनिकको सानो समाचार सोसल मिडियाकोे मुख्य एजेण्डा बन्दा सबै मिडियाले पछ्उन बाध्य भए । जब ठूला मिडियाले पछि ती एजेण्डा बोके, त्यस बेलासम्म समाचार भन्दा बाहेक अन्य उद्देश्य नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, जब बतास समूह प्रतिक्रिया दिने नाममा आफ्नो कमजारी मिडियाबाट ढोकछोप गर्ने उद्देश्यले आयो । तब, मिडियामा के त्यति धेरै स्थान दिनु पर्दथ्यो ? बतास समूहको प्रतिक्रिया प्रकाशन प्रसारण गर्नु मिडियाको धर्म हो । तर, बतास समूहको कमजोरी लुकाउने उद्देश्यले आएका र भएका गतिविधि भने शंकास्पद मान्नु पर्ने हुन्छ ।
यसले नेपाली मिडयामा केही प्रश्न उठाएको छ । बतास विरुद्ध आएका समाचार के सबै निरर्थक वा तथ्यहीन थिए ? एक सातामै बतास समूहका कुरा ठिक हुने अवस्था कसरी आयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर समयक्रमले देला तर एजेण्डा सेटिङबाला मिडियाका कारण पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमको प्रतिष्ठामा भने आँच पुग्ने निश्चित छ ।
नेताको शरणमा बतास
मिडियामा प्रभाव पार्ने हिसाबले मात्र बतास समूह सक्रिय भएन । राजनीतिक दलका नेतासँगको सम्वादलाई पनि सक्रिय बनायो । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतासँगको भेटले बतास समूहमाथिको आक्रमक कारबाही रोक्ने भूमिका खेलेको छ । प्रारम्भमा रेसटुरेन्ट भत्काउन सक्रिया मन्त्री आले अहिले बतासका विरुद्ध त्यति सक्रिय छैनन् ।
मन्त्री आले स्टण्डवाजीका लागि सक्रिय भएको आरोप नलागेको होयन । तर, राजनीतिक नेतासँगको पहुँचका कारण आले बिस्तारै चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेका हन् । बतास समूहले मिडिया, राजनीतिक नेता, विभिन्न संघ संस्था सबैलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाएको छ ।